«TRAIL DE LA LIBERTE» :: Nahavita pao-droa tany La Réunion ny atleta malagasy • AoRaha
«TRAIL DE LA LIBERTE» Nahavita pao-droa tany La Réunion ny atleta malagasy
Lasan’ny atleta malagasy avokoa ireo amboara roa niadiana nandritra ny fifaninanana hazakazaka an-tendrombohitra notanterahina tany La Réunion, tamin’ny 20 desambra lasa teo. Nitana ny laharana voalohany tamin’ity fifaninanana ity i Mampitraotsy, izay nahavita ny halaviran-dalana 12km tao anatin’ny 1ora 10’28’’.
Nihena ny halaviran-dalana tamin’ity taona ity satria raha 14 km izany tamin’ny taon-dasa dia nanesorana 2km kosa tamin’ny farany teo. Mbola i Mampitraotsy (Cospn Boeny) no tompondaka tamin’izany fifaninanana « trail de la liberté » izany, tamin’ny taona 2017 ary voatanany ny anaram-bonina­hitra ho an’ny taona 2018.
Resiny tamin’izany ry Parmentier Olivier avy ao amin’ny Cappos (1 ora 11’39’’) sy ilay atleta tanoran’i La Réunion, Lebon Vincent avy ao amin’ny CA de la Plaine des Palmistes (1ora 12’12’’), izay nitana ny laharana faharoa sy fahatelo tamin’io hetsika io.
Norombahin’i Mbolatiana Ramiandrisoa avy ao amin’ny Cnaps Sport kosa ny laharana voalohany teo amin’ny sokajy vehivavy, raha laharana faha-19 teo amin’ny filaharana ankapobeny no nisy azy. Vitany tao anatin’ny fe-potoana 1ora 23’35’’ ny anjarany. Nanaraka azy tao aoriana i Jacquet Claire (1ora 30’24’’) sy Hibon Fatima (1ora 35’23’’). Nahatratra valopolo amby zato ireo mpandray anjara nifaninanana tamin’ity hetsika ity.
TAFATAFA MIARAKA AMIN’I :: “Maro ireo tanjona fa mila fiomanana ara-bola”
BAOLINA KITRA :: Nampidirin’ny Jeune Afrique ho “Top 5” i Madagasikara